Ahịa tiketi ụgbọ elu ụgbọ elu Istanbul Konya | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulIstanbul Konya High Speed ​​Train Ticket Schedules and Schedule
15 / 07 / 2019 34 Istanbul, 42 Konya, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Mpaghara Marmara, Turkey
Kongbọ okporo ígwè dị elu na Istanbul Konya na-agba 3 kwa ụbọchị. Usoro ụzọ ụgbọ oloko a, nke bụbu njem njem nke 2, ka ebugara ya na njem 3 kwa ụbọchị. N'ụzọ dị otu a, a na-enyekwu ndị njem ohere njem. Ebe ikpeazụ ụgbọ oloko ahụ dị bụ Konya. Traingbọ ahụ mezue oge njem na nkeji 4 hour 20. -Gbọ okporo Ugbo elu nke Istanbul-Konya gafere Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir dị iche iche. Nwere ike ịzụta ụgbọ elu nwere nhọrọ ọkọlọtọ abụọ na mgbanwe mgbanwe yana 3 dị iche iche ụdị ụgbọ ala wagon.
Traingbọ ahụ gụnyere akụ na ụba pulman, azụmaahịa pulman, ụgbọ ala azụmaahịa pulman na nri. Ọnụahịa tiketi ụgbọ oloko dịgasị iche iche n'ụdị ụgbọ ala. Ndị njem nwere ike ịzụta tiketi site na ụdị wagon kachasị mma. N'otu oge ahụ, ego maka otu afọ na otu aka ọrụ nke TCDD Transportation maka ụgbọ oloko dị larịị bara uru na ụgbọ oloko a dị elu. Enyere ihe omuma zuru ezu na ngalaba nke tiketi.
TCDD Transportation, nke kachasị mma njem njem n'etiti Istanbul na Konya, bụ ngwa ngwa ụgbọ oloko nke na-akwụsị n'ọtụtụ ọdụ ma nata na nbudata ndị njem. Oge ezipụ ụgbọ okporo ígwè na ịbata na Konya na-enye n'okpuru.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịkpọ TCDD Transportation ma ọ bụ ị nwere ike ịmalite ịmalite njem njem a dị mma ma nwee ihe ịga nke ọma site na ịzụta tiketi gị ozugbo na ọnụ ahịa ahịa kachasị mma na ntanetịime ịntanetị.
(Kwadoro site na 08.12.2019)
Istanbul Konya YHT Ebugharị elekere
E nwekwara ọrụ ụgbọ ala maka ndị njem na-eji ụgbọ oloko a dị elu. N'ihi ozi a, ndị njem nwere ike ijikọta ya na mpaghara na ógbè ndị ọzọ mgbe ha jiri ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ ma nwee njem njem na-adịghị agwụ agwụ. N'okpuru ebe a bụ atụmatụ ụgbọ ala nke ndị njem na-eji Konya-Istanbul ma ọ bụ Istanbul-Konya High Speed ​​Trains.
Karaman-Konya Bus Schedules (Maka Istanbul YHT)
Antalya - Konya Bus Schedules (Maka Istanbul YHT)
Konya - Antalya Bus Schedules (Maka Istanbul YHT)
Konya K. 17.20 Antalya V. 22.35 Jikọọ Njikọ
Konya-Karaman Bus Schedules (Maka Istanbul YHT)
Konya K. 17.30 Karaman V. 18.40 zụọ njikọ
Ndị njem na-esi na Istanbul gaa Konya na-agafe na ọdụ ndị e depụtara n'okpuru ebe a.
Ọnụahịa ụgbọ elu ụgbọ elu Istanbul Konya High Speed
Ụkpụrụ ọkọlọtọ. 85.00 TL
Nri iri nri. 85.00 TL
Ụkpụrụ Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ. 123,50 TL
Ụgbọ ala nwere ike ịgbanwe. 102,00 TL
Ahịa ụgbọ mmiri na-agbanwe agbanwe. 148,00 TL
Ndị na-eto eto 13-26, ndị nkụzi, ụmụ amaala nke 60-64, ndị otu na-ebipụta akwụkwọ, ndị na-anata tiketi 12, ndị TAF na ndị njem ndị na-azụta tiketi njem site na otu ọdụ ahụ na-enweta ego% 20.
Ụmụ 0-6, ndị agha agha na ndị ikwu nke mbụ, ụmụ amaala nwere nkwarụ, ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu martyrs mbụ bụ n'efu.
Ụmụ amaala oge 65, ụmụaka nke 7-12, na ụmụaka nke 0-6 dị na ntinye maka ebe dị iche iche nwere ikike inweta 50% ego.
Istanbul Konya Ngwa ngwa ngwa
Istanbul Konya ngwa ngwa
Ezigbo Uche Nwere Mmasị Site na Ụmụ amaala
2019 Ego Tegharị Igo na Oge a - RayHaber